DEG-DEG: Borussia Dortmund Oo Ka Hadashay Safarka Mino Raiola & Alf-Inge Haaland Ee Ay Iibka Ugu Raadinayaan Erling Haaland - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaDEG-DEG: Borussia Dortmund Oo Ka Hadashay Safarka Mino Raiola & Alf-Inge Haaland Ee Ay Iibka Ugu Raadinayaan Erling Haaland
DEG-DEG: Borussia Dortmund Oo Ka Hadashay Safarka Mino Raiola & Alf-Inge Haaland Ee Ay Iibka Ugu Raadinayaan Erling Haaland
Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund ayaa ka hadashay safarka ay wakiilka Erling Haaland ee Mino Raiola iyo aabbaha dhalay laacibkan ee Alf-Inge Haaland ay ku joogaan waddanka Spain, kuwaas oo maanta la kulmay Barcelona iyo Real Madrid.
Khamiistii maanta ayay Raiola iyo Alf-Inge Haaland ay ka dageen waddanka Spain waxaanay kulamo la qaateen masuuliyiinta labada kooxood ee ugu waaweyn waddankaas.
Wararka hor-dhaca ah ee laga helay ayaa waxay sheegayaan in Madaxweyneyaasha Barcelona iyo Real Madrid ee Joan Laporta iyo Florentino Perez ay la kulmeen Mina Raiola iyo Alf-Inge Haaland, ayna gorfeeyeen suurtogalnimada haddii uu gool-dhaliyaha reer Norway ee Erling Haaland ay iibsanayaan.
Xilli ay masuuliyiintani ku sugan yihiin waddanka Spain, kooxda Borussia Dortmund ayaa war kasoo saartay mustaqbalka laacibkeedan kooxaha kale loo bandhigayo sidii ay u iibsan lahaayeen, waxaanay sheegtay in go’aanku yahay in aanay xagaagan iibinayn Erling Haaland.
Agaasimaha Borussia Dortmund ee Michael Zorc oo la hadlay warbaahinta ayaa meesha ka saaray in kooxdiisu ay iibinayso Haaland, waxaanu yidhi: “Aad iyo aad ayaanu uga degganahay arrintan, waxaanan ogahay waxa aanu doonayno. Ma doonayno in aanu iibino Haaland.”
Michael Zorc waxa uu si cad uga hadlay Mino Raiola iyo aabbaha dhalay Haaland ee Alf-Inge Haaland, waxaanu yidhi: “Anigu ma doonayo inaan ka hor imaaddo doonista labadan nin.”
Si kastaba Erling Haaland ayaa lala xidhiidhinayaa kooxaha ugu waaweyn Yurub, waxaana hadal-haynta ugu badan ay yihiin Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester United iyo Manchester City.
Mino Raiola iyo Alf-Inge Haaland ayaa la sheegay in marka ay dhamaystaan kulamadooda Barcelona iyo Real Madrid, in ay u duuli doonaan waddanka Ingiriiska oo ay la kulmi doonaan saddexda kooxood ee Chelsea, Manchester City iyo Manchester United.